Information in Somali about CNWL CAMHS | CAMHS
Bogani wuxuu kusiinayaa warbixin kooban oo kusaabsan adeegga caafimaadka maanka ee caruurta iyo dhalinyarada CAMHS. Waxaa loogu talagaley dadka kuhadla af Somaliga. Haddii sua’alo, ama faahfaahin intan kabadan aad u baahantay, fadlan la soo xidhiidh adeega CAMHS ee ku yaala xaafadaada (helitaanka adeegga). Haddii aad u baahantahay in lagaa taageeru kuhadalka afka ingiriiska, shaqaalaha CAMHS ayaa kuu qabannaya qof turjubaan ah.
Waa maxay CAMHS?
CAMHS waxay u taagantahay adeegga maanka ee loogu talagalay caruurta iyo dhalinyarada. CAMHS waxay taageertaa caruurta iyo dhalinyarada (da’dooda u dhaxeeyso (0-18) iyo waalidkood. Shaqaalaha CAMHS waxay leeyihiin xirfado kala duwan waxayna fidiyaan taageero kaladuwan oo kuxidhan hadba nooca daryeel ee uu ilamaha iyo reerkiisu doonayaan.Waxayna arkaan dhalinyarada kaligood ama iyagoo la socda reekooda.
Waa maxay micnaha “caafimaadka maanka” ?
Marka uu qofku jidhkiisu iyo ruuxiisu fiicantahay oo uu ka soo bixi karo waajibaadka ku aadan nolol maalmeedkiisa waxaa lagu tilmaami karaa in uu yahay qof caafimaadka maankiisu uu fiican yahay. Caafimaadka maanka waxaa loogala jeedaa dhibaato ku timaada qofka fakirkiisa, dareenkiisa iyo ladhaqankiisa dadka oo saameynku lahaata nolol maalmeedka qofka. Dhibaatoonyikan waxay ku dhici karaan qof walba kumana xirna da’, qomiyad, diin ama maskax furan. Mar marka qaarkood dhibaatooyinkan waxay qabsankaraan dadka markaay la kulmaan wax cabsigalinaya ama culeysku abuuraya. Mar marka qaarkoodna waxay dhacaan hadey dhibaatooyin yaryari si dabajoog ah qofka u qabsadaan. Waxaa suuragal ah in qof yar ama reerkiisu ayna helin taageero ku aadan wax kaqabashada dhibaatooyinka soo wajahda. Mar marka qaarkood ma cada sababaha ay dhibaatooyinkani u saameeyaan qofka.
Dadku way ku kala duwan yihiin fikradaha ay kaqabaan ama fahankooda kuaadan caafimaadka maanka.AdeeggaCAMHS wuuixtiraamaa ra’yiga dadkawuuna la shaqeynayaa qoyskaaga.
Waa maxaydhibaatooyinka kaladuwan ay CAMHS kaacaawin karto?
Adeegga CAMHS wuxuu caawiyaa caruur iyo waalidiin ay haystaan dhibaatooyin kala duwan. Mar marka qaarkood caruurta/dhalinyarada nasoo booqata waxay dhibaato kala kulmaan xaga la dhaqanka qoyskooda, iskuulka ama asxaabtooda. Qaarkood waxay dareen sanyihiin niyad jab, culays ama walaac saaid ah. Qaarkood waxay dhibaato uga iman kartaa cunnida ama way xanaaq dhaw yihiin.Qaarkood waxaa hooseeya fayigsaarkooda ama waxaa ku adag iney helaan asxaab. Qaarkood waxay maqlaan ama arkaan wax aan qof kale arkikarin ama maqli karin. Ilaa iyo xad waxyaabahani waa wax caadi ah, lakiin haddii ay bilaabaan in ay kaamashquuliyaan nolol maalmeedkaaga waxaad u baahantahay caawinaad dheeraad ah.
Mar marka qaarkood Markey dhalin yarada ku adkaato la qabsashada dhacdoonyinka waxaa laga yaabaa in ay isku dayaan iney naftooda dhaawacaan ama in ay kafakaraan in ay qudhooda jaraan. Dhalinyarada waxaa laga caawin karaa fikradahan iyo dareemahan. Haddii addiga fikirkani kuhaysto ama aad garaneyso qof doonaya inuu naftiisa dhaawaco waxaa muhiim ah inaad la hadasho qof mas’uul ah oo aad aamini kartid. Sida ugu dhakhso badan waa in aad ula xidhiidhid gargaarka deg-degga ah ama GP (dhakhtarkaagaguud ).
Dhibaatooyinkan oo aanu dusha ku qeexnay waxay walaac ku abuurikaraan qofka yar iyo qoysaskooda.Adeegga CAMHS wuxuuu joogaa in uu qoyska ka caawiyo fahanka dhibaatooyinkan iyo sida ugu fiican ay uga gudbi karaan. Adeegga CAMHS lama mid aha kooxda adeegga bulshada. Waxaanu la tashanaa qofkii noosoo kaagudbiyay oo kaliya, oo macluumaadkaa adnasiisid waxaan ula dhaqanaa si qarsoodi ah. Hadii aanaan cabsi kaqabin in aad khatar ku noqonkartid ama dhaawac u gaysan kartid qof kale, dhibaatooyin kaaga aad noo sheegtid qof kale kalama hadalno anaka oo aan fasax addiga kaa helin.Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino.
Side ayaankuhelayaabalan CAMHS?
Dadku badanaa waxay la hadlaan dhakhtarkooda guud ama iskuulkooda ama shaqaalaha kataageera dhibaatoonyinka qoyskooda ama caruurtooda haysata oo hadhowna dhibaatadii oo qoraal ah soodira. Adeegyada CAMHS qaarkood waxay aqbalaan in qofka yari ama qoysku sitoos ah ula soo xidhiidhaan. Shaqaalaha CAMHS way kawada hadlaan dadka loo soo gudbiyo. Si toos ah ayaanu la soo xidhiidhnaa oo aanu balan ugu qabanaa dadka. Haddii aanu kuqanacno in uu adeegeenu idincaawinkareyn, adigaa maqofkii idin soo gudbiyay ayaan la xidhiidhaynaa sidaan idiin lasocodsiino sababaha la idiin caawin Karin.
Maxaa dhicidoona balanta u horreysa?
Balanta u horreysa waxaan ku weydiinaynaa su’aalo si aan fahankeena ku aadan baahida ilmaha ama qoyska aanu kororsano, sida ‘dhibaatooyin uu la kulmey ilmahaaga?’ ‘goorma ayey ku bilaab meen?’ ‘muxuu ku ladnaadaa?’ ‘maxaa dhibaatada siikordhiyaa?’ ‘siday tahay markuu guriga/ iskuulka uu joogo?’ ‘waamaxay isbadalka aad raadinaysaa?’. Dadka qaarkood waxay dareemaan walwal intayna balanta ugu horeysa ee CAMHS iman.Waan fahmikarnaa taas, waxaan dhegeysanaynaa walwalkaaga, su’aalahaaga ama wixii cabasho ah oo aad qabtid. Haddii aanad ku kalsooneyn luqadaada ingiriisiga (xitaa haduu ilmahaagu yaqaano) waxaan awoodnaa in laguu helo turjubaan yimaada balanta.
Maxaa dhicidoona balanta kabacdi?
Adeega CAMHS wuxuu kulamada ugu horeeya u isticmaalaa siikordhinta fahanka ku aadan sababaha keentay dhibaatooyinka aad qeexdid iyo sidaaanu uga wada hadlilaheyn nooca waxtarka aan kuufidinkarno.